Dancing Queen ပီသစွာ အားလုံးရင်သပ်မောရှုမောဖြစ်အောင် ကပြဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ Lisa ရဲ့ Fan Cam (6) ခု - Asia News Bar
Dancing Queen ပီသစွာ အားလုံးရင်သပ်မောရှုမောဖြစ်အောင် ကပြဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ Lisa ရဲ့ Fan Cam (6) ခု
BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Lisa ရဲ့ solo album က မကြာခင် ထွက်ရှိတော့မှာပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ Lisa ဟာ သူမရဲ့ stage performance တွေကို အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Real life မှာဆို အပြုံးလှလှလေးနဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ Stage ပေါ်ရောက်တာနဲ့ အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်သွားပြီး အကြည့်တွေကအစ
လှိုက်ဖိုစရာပါ။ သူမဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အ fine ဆုံး stage performance တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. “Swalla” dance cover
ဒါကတော့ BLACKPINK concert သွားဖူးသူတွေသာ သိနိုင်မဲ့ Lisa ရဲ့ solo stage ပါ။ Jason Derulo ရဲ့ Swalla သီချင်းကို cover က ထားတာ ဖြစ်ပြီး back up dancer တွေနဲ့ တူတူကတာ ဖြစ်ပေမဲ့ Lisa က ပို ထင်းထွက်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ facial expression တွေကြောင့် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ stage performance တခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
2. “How You Like That” on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
“How You like that” ဆိုတဲ့ စာသားကို မျက်ခုံးပင့်တင့်ပြီး ခပ်ချေချေဆိုလိုက်တဲ့ scene က လုံးဝကို iconic ပါဘဲ။ သူမရဲ့ dance skill တွေကတော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် မိမိုက်နေပြီး မာန်ပါပါနဲ့ ကခဲ့ပါတယ်။
3. “So Hot (THEBLACKLABEL Remix)” at the 2017 SBS Gayo Daejun
Wonder Girls အဖွဲ့ရဲ့ “So Hot” သီချင်းကတော့ girl group တော်တော်များများ cover ဆိုဖူးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ BLACKPINK ကတော့ cute type ထက် swag type ကို သွားတဲ့ style နဲ့ ပြန် cover ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Lisa နဲ့ Jennie တို့ရဲ့ own rap ပါ ထိုသီချင်းမှာ ထည့်ရွတ်လိုက်တော့ လုံးဝအမိုက်စား သီချင်းဖြစ်သွားတော့တာပါဘဲ။
4. “Whistle” debut performance at SBS Inkigayo
Whistle သီချင်းဟာ BLACKPINK ရဲ့ debut song ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ ပထမဆုံး Live ဖျော်ဖြေရတာ ဖြစ်ပေမဲ့ Lisa ကတော့ ဝါရင့်နေတဲ့ Pro တစ်ယောက်အတိုင်း သီဆိုဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ stage performance ဟာလည်း Lisa ရဲ့အကောင်းဆုံး​တွေထဲက တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
5. “Kill This Love” at Coachella 2019
Cochella မှာ BLACKPINK အဖွဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တာကတော့ တကယ့်သမိုင်းတွင်မဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီးပါ။ မူရင်းတီးလုံးတွေထက် ပို fine တဲ့ beat ကြမ်းကြမ်းတွေ သုံးထားပြီး member တွေကလည်း Live ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာဟာ အားလုံးကို မြူးကြွစေခဲ့ပါတယ်။ “kill this love” ကို ဖျော်ဖြေတုန်းက နည်းနည်းကြောင်သွားဖူးတယ်လို့ Lisa က ပြောပြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Lisa က pro ပီသစွာ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ထိုအမှားကို သတိတောင် ထားမိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဖူး။
6. “Pretty Savage” on The Late Late Show with James Corden
“Pretty savage” stage performance တွေထဲမှာ ဒီ performance က အမိုက်ဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။ outfit တွေကအစ dark theme နဲ့ အလန်းဇယားဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေမှုတွေကလည်း ရင်သပ်ရှူမောစရာပါ။ Lisa ရဲ့ rap skill တွေကလည်း အားလုံးကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Next ၂၀၂၂ အတွက် အမျှော်ဆုံးဇာတ်လမ်းဖြစ်လာတဲ့ Gulf နဲ့ Janie တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ် »
Previous « ပေါ့​ပေါ့ပါးပါး Rom-Com ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ ပုံစံအဆန်းနဲ့ မြင်​တွေ့ရဖို့ ရှိ​နေတဲ့ Cha Eun Woo